Ny mpilalao baolina kitra eoropeana biograpiana momba ny tantaran'ny fahazazana zaza
rehetraMpilalao Football any BelzikaMpilalao Football KroasiaMpilalao Football FootballMpilalao Football FootballMpilalao baolina kitra frantsayMpilalao Football AlemaninaMpilalao Football any ItalianaMpilalao Football FootballMpilalao Football Football
Tantara Florentino Luis Childhood plus Plus Untold Biography Facts
Raphael Guerreiro Tantaran'ny fahazazana ho an'ny ankizy iray ary ny zavamisy momba an'i Untold Biography
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN
Ireo mpilalao baolina kitra matihanina avy any Eropa dia samy manana ny tantara momba ny fahazazana sy ny zava-misy iainan'ny ankizy. Ny iraka ataonay dia ny mitondra anao amin'ireto fotoana tsy hay hadinoina ity, feno tantara mahafinaritra sy mampihetsi-po mahaliana.
Maninona izahay no milaza amin'ny tantaran'ireo mpilalao baolina kitra eropeana sy ny tantara momba ny fahazazana
Raha ny marina, dia ny famahana olana iray fantatra. Nahita elanelam-pahalalana ao amin'ny tranonkala eran'izao tontolo izao izahay, misy ifandraisany amin'ny tsy fisian'ny votoaty voarindra momba ny Zaza sy ny Biography an'ny Footballers Eropeana.
Miaraka amin'ny fijerinao ny hantsana, LifeBogger nanapa-kevitra ny hametraka iraka hanaterana matetika ny tantara momba ny fahazazan-jaza sy ny fitantarana ny fahazazan-jaza ho an'ny mpilalao baolina kitra avy any Eoropa.
Mifantoka amin'ny Football Football any Angletera
Manomboka, ny lahatsoratra tsirairay momba ny mpilalao baolina avy any Eropa dia manambara lozika lozika ary mirakitra ireto teboka manaraka ireto.
Izahay dia mitantara ny fahazazan'ny mpilalao baolina kitra eoropeana, manomboka amin'ny fahaterahany sy ny niainany voalohany.
Manampy anao izahay momba ny fiavian'ny fianakavian'ireo mpilalao baolina kitra eoropeana. Mbola bebe kokoa ihany koa ny fiavian'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreniny (amponga sy ny dadany).
Lazainay aminao ireo hetsika voalohany tamin'ny Fiainana izay nitarika ny fahaterahan'ny Footballers Eropeana.
Ambonin'izany, ambaranay aminao ny zavatra niainan'ny Footballers Eropeana nandritra ny Tanora Niroso tamin'ny Tanora.
Ny làlana ho amin'ny tantara malaza- Eto, milaza aminao izahay ny Turning Point na ny "Game Changer" izay niainan'ny mpilalao baolina eropeana, iray izay nahatonga azy ireo hahatsapa ny fahombiazany hatrany amin'ny lavitra.
Ny hatsangana amin'ny tantaram-piainana- Eto, milaza aminao izahay ny tena fahombiazana momba ny fahombiazana sy ny toeran'ny lalao amin'ny lalao mpilalao Eoropeana amin'izao fotoana.
Mandeha indray izahay hanambara aminao ny sata mifandraisan'ireo mpilalao baolina eropeana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny “Fitiavan-dry zareo” - Fitiavan-dehilahy (WAGS) na Vadiny.
Manaraka ireto ny fitantarana tsotra momba ny Fiainan'ny tena mpilalao baolina kitra eoropeana.
Avy eo izahay dia mifankahalala amin'ny fianakavian'ireo Footballers Eoropeana sy ny fifandraisan'izy ireo amin'izy ireo.
Ny ekipanay dia mampahafantatra bebe kokoa ny Tomban'izy ireo, ny Net ary ny fomba fiaina.
Farany, mitondra anao Untold zava-misy mbola tsy fantatrao izahay fa nisy momba azy ireo.
Hatreto aloha, ny ekipanay dia nanimba ity sokajy eoropeana ity tao amin'ny Subs subs. Anisan'izany;
Raha fintinina, ny LifeBogger dia mino fa ny hanome ny fahalalana amin'ny lafiny fanaterana Tantara momba ny fahazazana ary Zava-misy Biography an'ny Football Football Eropa. Tsotra dia manome valiny amin'ireo fanontaniana napetraky ny mpitia baolina kitra momba ny mpilalao baolina kitra ankafiziny izahay.
Na eo am-piezahantsika ny fahamarinana sy ny hitsiny isika, tsara fanahy Mifandraisa aminay raha hitanao ny momba ny lahatsoratra eropeana.
Farany, atolotray anao ny tantaran'ny fahazazana sy ny tantara momba ny fahazazana an'ny Footballers Eoropeana efa niandrasanao azy.
7 andro malaza
By famerenana isa
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 31 may 2020
Tantaran'i Marcus Thuram Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Yacine Adli Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 15 may 2020 0
Izahay dia manolotra fitantarana feno momba ny Yacine Adli Childhood Tantara, Biography, Life Life, Faces de suissement, background background, ray aman-dreny, fiainana manokana ary fomba fiaina. Feno fa ...
Alessandro Bastoni Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 9 may 2020 0
Ny lahatsoratra dia manome anao ny fitantarana feno momba an'i Alessandro Bastoni Childhood Tantara, Biography, Fianakaviana, Ray aman-dreny, Fiainana, Fiainana, Fiainana manokana ary Fiainana miaina. Izany ...
Tantara Jean-Philippe Mateta Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 1 may 2020 0
Izahay dia manolotra tantara feno momba an'i Jean-Philippe Mateta Zaza Ankizy, Zava-misy momba ny Biografia, Fiainana voalohany, Fitiavana (sipa / vady) Zava-misy, fianakaviana, ray aman-dreny, fiainana manokana ary fiainana. Izy io ...
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 14 aprily 2020 0
Tongasoa! ... Ny lahatsoratra dia manome fitantarana feno momba ny Dayot Upamecano Childhood Tantara, Biography, Zavam-pianakaviana, ray aman-dreny, fiainana tany am-boalohany, Fiainana manokana, sakaizan-dehilahy, Fiainana ary ...
Tantara momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza ka hatramin'ny Untold Biography Facts
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 18 aprily 2020 0
Ny lahatsoratra dia manome fitantarana feno momba ny tantara momba ny fahazazan-jaza, Biography, Fiainan'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, ny fiainana voalohany, ny fiainana manokana, ny sakaiza, ny fiainana ary ny hafa ...
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 15 aprily 2020 0
Tonga soa eto !. Ny lahatsoratray dia manome fitantarana feno momba an'i Ferran Torres Childhood Tantara, Biography, Family Facts, ray aman-dreny, fiainana voalohany, fiainana, tovovavy, fiainana manokana ary fiainana hafa malaza ...
Manomboka, izy dia nomena anarana hoe "Marco". Manome anao ny fandrakofana feno momba ny tantaran'ny fahazazan-jaza Marcos Llorente, Biography, Zava-misy momba ny fianakaviana, ray aman-dreny, fiainana tany am-boalohany, fiainana manokana, ...
Ny lahatsoratra nataonay dia manome fitantarana feno anao momba an'i Daniele Rugani Childhood Tantara, Biography, Fiainam-pianakaviana, ray aman-dreny, Fiainana antitra, fiainana, tovovavy, fiainana manokana ary fiainana malaza ...
Manomboka, izy dia nomena anarana hoe "The Beast". Manome anao ny fandrakofana feno momba an'i Mariano Diaz Childhood Story, Biography, Family Facts, ray aman-dreny, fiainana tany am-boalohany, fiainana manokana ...
Marcel Sabitzer Tantara momba ny fahazazana sy Untold Biography Facts
Manomboka, ny anarany dia "Big Sabi". Manome anao ny fandrakofana feno momba an'i Marcel Sabitzer Childhood Tantara, Biography, Zava-misy momba ny fianakaviana, ray aman-dreny, fiainana tany am-boalohany, fiainana manokana ...
123...26Page 1 ny 26